San Htun's Diary: ဖတ်ပြီးတဲ့ စာအုပ်တွေ - ၁
ကိုရီးယားရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်တာလျှော့မယ်၊ ဖေ့ဘုတ်သုံးတာတွေ လျှော့မယ်၊ စာများများဖတ်မယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွှယ်ချက် ဒီနှစ်တော့ အတော်အသင့် အောင်မြင်တယ်လို့ဆိုရမယ်။ ကိုယ်ဖတ်ပြီးတဲ့ စာအုပ်တွေအကြောင်း မျှဝေချင်ပါတယ်။ ဖေ့ဘွှတ်မှာ မိတ်ဆွှေဖြစ်တဲ့ စင်္ကာပူမှာနေတဲ့ စီနီယာအမကြီးက သူစိတ်ဓာတ်ကျတိုင်း အဲဒီစာအုပ်ကိုဖတ်တယ်။ ဖတ်ပြီးတိုင်းလည်း စိတ်ဓာတ်ခွှန်အားတွေရတယ်လို့ညွှန်းထားတော့ စာကြည့်တိုက်ကနေ ငှားဖတ်ဖြစ်တယ်။ ဘာဆက်ဖြစ်မလဲလို့သိချင်လာပြီး အစကနေ အဆုံးအထိ လက်ကမချချင်လောက်အောင် ကောင်းတဲ့စာအုပ်။ ဒါကြောင့်လည်း နံပါတ်ဝမ်း နယူးယောက်တိုင်း ဘတ်စ်ဆဲလားစာအုပ် ဖြစ်တာကိုး။ ဇာတ်လမ်းတည်နေရာက အမေရိကန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း မစ်စစ်စပီပြည်နယ် ဂျက်ဆင်မြို့အချိန်ကာလ လူဖြူလူမည်းခွဲခြားမှု ပပျောက်ရေး၊ တန်းတူအခွှင့်အရေးရရေး တုိုက်ပွှဲဝင်နေချိန်၊ ၁၉၆၃ သြဂုတ် ၂၈ မာတင်လူသာကင်း ကမ္ဘာကျော် I haveadream မိန့် ခွှန်းမပြောမှီ တစ်နှစ်အလို။ ကောလိပ်ကျောင်းဆင်း မစ်စကီတာ သတင်းစာရဲ့Good Housekeeping ကော်လံရဲ့တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ၊ စာဖတ်သူတွေ မေးမြန်းလာတဲ့ မီးဖိုချောင်ထဲက ပြသနာတွေကို လူမည်းအိမ်စေကိုမေးပြီး ရေးသားသူ။
နယူးယောက်တိုင်းမှာ အလုပ်တောင်းတော့ မန်နေဂျာက လူမည်းအိမ်စေတွေကို အင်တာဗျူးပြီး သူတို့ ရဲ့ အတွေ့ အကြုံ၊ ခံစားမှုတွေကို စာအုပ်ရေးပါလားလို့အကြံပေးတော့ စာအုပ်ရေးချင်ပေမဲ့ လူမည်းအိမ်စေတွေက ယုံကြည်မှာမဟုတ်သလို ဘယ်တော့မှပြောမှာမဟုတ်။ လူဖြူကလေးတွေကို သွှေးသားရင်းလို ချစ်ပေမဲ့ အိမ်သာအတူသုံးခွှင့်မရှိ၊ ယူနီဖောင်း ဝတ်ထားမှ မင်္ဂလာဆောင်တက်ခွှင့်၊ ထမင်းအတူစားခွှင့်ရှိတဲ့ လူဖြူလူမည်းခွှဲခြားမှုတွေ။ ၁၉၆၃ မာတင်လူသာကင်းရဲ့ဝါရှင်တန်ချီတက်ပွဲမတိုင်ခင် စာအုပ်ထုတ်ဖို့ ဆိုရင် ၃ လလောက်ပဲ ရှိတော့တာမို့အချိန်ကလည်း မရှိတော့သလို မစ်နီနဲ့အယ်ဘီလီယမ်တို့ လို မစ်စကီတာကို ယုံကြည်ပြီး အင်တာဗျူးခံတဲ့ လူမည်းအစေခံက နည်းနည်းလေးဆိုတော့ စာအုပ်ထုတ်ဖြစ်ပါ့မလားလို့စိတ်တထင့်ထင့် ဖြစ်နေချိန် မထင်မှတ်ထားတဲ့ အရာတွေ ဖြစ်လာတော့ ... ဖတ်လို့ တကယ်ကောင်းတဲ့ စာအုပ်လေး။ စာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့မှ သိတယ် ဗွီဒီယိုရှိမှန်း ဗွီဒီယိုနာမည်ကလည်း စာအုပ်နာမည်အတိုင်း The Help အယ်မာစတုန်းက မစ်စကီတာအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားတယ်။ ဗွီဒီယိုမကြည့်ရသေးဘူး ဝထ္ထုကတော့ ဗွီဒီယိုထက် ပိုကောင်းလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
ဝိုင်းက Minimalism အိုင်ဒီယာကို သဘောကျတယ် ပစ္စည်းတွေ အများကြီးရှိမဲ့အစား ကွှာလတီကောင်းကောင်း အရေအတွက် နည်းနည်းလေးနဲ့နေနိုင်အောင် ကြိုးစားနေတယ်လို့ ပြောတော့ ဘာလဲ ဘရန်းလက်ကိုင်အိတ်တွေ နောက်ထပ်မဝယ်တော့ဘူးပေါ့ ဟုတ်လားလို့့နောက်တော့ ရယ်နေလေရဲ့ ။ ကိုယ်က Minimalism လည်းမဟုတ် Materialist လည်းမဟုတ် နာရီ၊ မျက်မှန်ကျတော့ တစ်ခုတည်းရှိပေမဲ့ အင်္ကျီ၊ ဘောင်းဘီ၊ ဖိနပ်၊ အိတ်ကျတော့ အများသား။ ခုခေတ်က Sale တွေကလည်းများ တန်လို့ဒီဇိုင်းကြိုက်လို့ခရီးသွှားရင်ဝတ်ဖို့နွှေရာသီဝတ်ဖို့ဆောင်းရာသီဝတ်ဖို့လက်ဆောင်ပေးဖို့ နဲ့ဝယ်ရင်းဝယ်ရင်း ပစ္စည်းတွေက မနည်းမနော။ ကိုယ်က ထမင်းချက်ဖို့ သာပျင်းသာ အဖေတူသမီးဆိုတော့ အိမ်ရှင်းတာ ဝါသနာပါတယ်။ အိမ်ရှုပ်နေရင် မနေတတ်ဘူး ပစ္စည်းတွေ စနစ်တကျစီ သန့် ရှင်းတောက်ပြောင်သွှားလို့ကျေနပ်သွှားတဲ့ ခံစားမှုမျိုးက ဘာနဲ့ မှမတူဘူး။ ခုခေတ်က ပစ္စည်းတွေများတော့ ဘယ်လိုပဲ သိမ်းဆည်းရေးလုပ်လုပ် ပစ္စည်းတွေက များမြဲများဆဲ။ ဟိုနားကနေ ဒီနားပြောင်းလိုက် ဒီနားကနေ ဟိုနားရွှေ့ လိုက်ဆိုတော့ တကယ်ရှင်းလင်းတာမှ မဟုတ်တာကိုး။ အိမ်ကြီးကြီးတွေမှာ ပြသနာမရှိပေမဲ့ နယူးယောက်လို နေရာကျဉ်းတဲ့နေရာမှာတော့ ထားစရာနေရာက ပြသနာ။ ဈေးချလို့တန်တယ်ဆိုရင်တောင် ထားစရာနေရာမရှိလို့မဝယ်ရဲဘူး။ ဂျပန်ပြည်မှာ ကမ္ဘာကျော် သိမ်းဆည်းရှင်းလင်းရေး ဂုရုတစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ Marie Kondo ရဲ့ the life-changing magic of tiding up စာအုပ်က ကမ္ဘာကျော်ပါတယ်။
စာကြည့်တိုက်ကနေ ငှားဖတ်တာ စာအုပ်လေးက ပါးပါးလေး။ ကိုယ်ကလည်း tiding up ကို နှစ်သက်သူမို့ လို့ လားတော့မသိ ဖတ်လို့ တအားကောင်းတယ်။ နောက်အသစ်ထွက်တဲ့ Spark Joy စာအုပ်ကို ပိုကြိုက်တယ်။ Kon Marie နည်းအရဆိုရင် ၃ နှစ်အထက်ကလေးတွေတောင် tiding up လုပ်လို့ ရပါတယ်။ အမြဲမလုပ်နိုင်ရင်တောင် တစ်နှစ်တစ်ခါလောက်တော့ လုပ်ကြည့်ပါ ပစ္စည်းတွေကို သိမ်းဆည်းရှင်းလင်းပေးတာတင် မဟုတ်ဘူး အတွှေးအခေါ်ကိုပါ ပြောင်းလဲစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Kon Marie နည်းအရ အဝတ်အစား၊ အိမ်သုံး၊ sentimental things ဆိုပြီးခွဲခြားထားပါတယ်။ အဝတ်အစားတွေ ရှင်းတော့မယ်ဆိုရင် အဝတ်အစားတွေအားလုံး တနေရာမှာစုံပုံ Spark Joy ဖြစ်တဲ့ အဝတ်အစားတွေက သပ်သပ်၊ မဖြစ်တာကသပ်သပ်။ Spark Joy ဖြစ်မဖြစ် ဘယ်လိုသိနိုင်လဲဆိုတော့ အဝတ်အစားကို ထိလိုက်ကိုင်လိုက်တာနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကို ခံစားရတယ်။ တခါတလေတော့လည်း Spark Joy ဖြစ်သလိုလို မဖြစ်သလိုလို Good Bye ထဲလည်း မထည့်နိုင် နောင်တချိန် ဝတ်မယ်ဆိုပြီး တုံချိတုံချိနဲ့မပြတ်မသား ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ Spark Joy ဖြစ်တဲ့အရာတွေနဲ့ဝန်းရံထားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ ချစ်ခင်စရာကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။ Good Bye လုပ်မဲ့အရာတွေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မင်းကြောင့် တချိန်က ပျော်ရွှင်ခဲ့ရပါတယ် လှပခဲ့ရပါတယ်ဆိုပြီး နှုတ်ဆက်သင့်ပါတယ်တဲ့။ အိမ်သိမ်းဆည်းရေး စာအုပ်ဆိုပေမဲ့ ပျင်းစရာမကောင်းဘဲ Kon Marie နည်းက ဘာတွေလဲ ဘာလို့ ကမ္ဘာကျော်တာလဲဆိုတာ ဖတ်ပြီးရင် သိသွှားပါလိမ့်မယ်။
ဆယ်တန်းအောင်ပြီးချိန် လှည်းတန်းက ဆရာကြီးဦးမြကြိုင် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း သွှားတက်တော့ ဆရာကြီးက စာအုပ်သိပ်ကောင်းတာပဲလို့ချီးကျူးချင်ရင် This novel is very good. လို့မပြောရဘူးတဲ့ I am so moved to read this book. လို့ပြောရတယ်တဲ့။ I am so moved လို့ပြောချင်တဲ့စာအုပ်ကတော့ ရှေ့ အပတ်ကမှ ဖတ်ပြီးသွှားတဲ့ Kite Runner စာအုပ်ပါ။ စက်တင်ဘာ ၄ လေဘာဒေးပိတ်ရက်မှာ ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်က ဆူနမ်နဲ့ ရာမားဆီ သွှားလည်တော့ မတွေ့ တာ ၃ နှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဆူနမ်၊ ရာမားနဲ့စကားတွေအများကြီး ပြောဖြစ်တယ်။ ဆူနမ်က သူကြိုက်တဲ့ အဆိုတော် နယူးယောက်မှာ ဖျော်ဖြေပွဲရှိလို့ ၊ Lion King ဘရော့ဝေးရှိုး လာကြည့်ပေမဲ့ မနက်သွှားညပြန် ကိုယ်ကကြိုပို့ လုပ် ဘယ်တော့မှ အေးအေးဆေးဆေးမရှိ အချိန်လု အမြဲသုတ်သုတ် ပြေးလွှားနေတော့ စကားကောင်းကောင်း ပြောချိန်မရှိ။ ဆူနမ်က ကိုယ်ဖတ်နေတဲ့ The Great Gatsby စာအုပ်ကို ဖတ်ချင်နေတာတဲ့။ ဆူနမ်က သူဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေအကြောင်း၊ ကိုယ်ကလည်း ကိုယ်ကြိုက်တဲ့စာအုပ်တွေအကြောင်းပြော။ ဆူနမ်ညွှန်တဲ့ စာအုပ်တွေက Kite Runner ၊ Gone Girl ၊ Tell me your dreams ။ ဂင်္ဂါဖတ်နေတဲ့ စာအုပ်က ပူလစ်ဇာဆုရတဲ့ The Good Earth ။ အဲဒီစာအုပ်ကို ဘရွှက်ကလင်း ဘော်တနစ်ကယ်ဂါးဒင်းရှေ့ မှာရောင်းတဲ့ စာအုပ်ဆိုင်မှာ တွေ့ ဖူးတယ်။ ပူလစ်ဇာဆုရစာအုပ်ဆိုတော့ ဖတ်ချင်တာ ဈေးကြီးလို့မဝယ်ဖြစ်ဘူး။ ခု ပြန်တွှေ့ တော့ ဓာတ်ပုံရိုက် စာကြည့်တိုက်ကနေ ငှားထားပြီးပြီ မဖတ်ရသေးဘူး။
Kite Runner ဇာတ်လမ်းကို ဆူနမ်က မပြောပြဘူး သူငယ်ချင်း၊ ညီအစ်ကိုသံယောဇဉ်အကြောင်း ဖတ်ကြည့်ပါတဲ့။ အာဖကန်နစ်စစ္စတန်နိုင်ငံ ကဘူးမြို့ က လူကုံတန် တစ်ဦးတည်းသား အက်ဘာ အိမ်စေသား ဟက်ဆန်နဲ့ က ညီအစ်ကိုလို ခင်ကြတယ်။ အက်ဘာက ဟက်ဆန်ကို သစ္စာဖောက်၊ ရုရှတွေဝင်ရောက်လို့ပါကစ္စတန်ကိုပြေး၊ အဲဒီကနေ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာ ဒုက္ခသည်အဖြစ် ရုန်းကန်၊ အက်ဘာ့အဖေ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းက မသေခင်လာတွေ့ ပါဆိုလို့ ပါကစ္စတန်မှာသွှားတွေ့ တဲ့အချိန်မှာ မထင်မှတ်ထားတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ အမလေး ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာများ ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြည့်ပါ။ နယူးယောက်တိုင်း ဘတ်ဆဲလာနံပါတ်ဝမ်း နှစ်နှစ်ဆက်တိုက် ကော်ပီ ၇ သန်းရောင်းရတဲ့စာအုပ်။ ဆရာဝန်စာရေးဆရာ Khaled Hosseisni ရဲ့Kite Runner ကို ဖတ်ပြီးတော့ နောက်ထပ်စာအုပ်တွေဖြစ်တဲ့ A thousand splendid suns နဲ့And the mountains echoed စာအုပ်ကို ဖတ်မလို့စာကြည့်တိုက်မှာ Hold လုပ်ပြီး စောင့်နေတယ်။ အိမ်နားကပန်းခြံမှာ လမ်းသွှားလျှောက်ဖို့လာခေါ်တတ်တဲ့ တရုတ်မလေး ကက်သရင်းက အိမ်ပြောင်းသွှားတာ နှစ်လလောက်ရှိပြီ။ အမှတ်မထင် City Hall ရှေ့ မှာဆုံလို့ စကားတွေပြောကြရင်း Kite Runner စာအုပ် ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာလို့ ပြောတော့ အာဖကန်နစ္စတန်အကြောင်းမလား သူက A thousand splendid suns ကို ပုိုကြိုက်တယ်တဲ့။ Kite Runner ထက် ပိုကောင်းမလား ဖတ်ကြည့်မှပဲ သိတော့မယ်။ စာအုပ်တွေ အများကြီး ဖတ်နိုင်ကြပါစေ။
စက်တင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၇။
နေ့ လည်ထမင်းစားပြီးချိန် လမ်းမလျှောက်တော့ဘဲ ရုံးနားက ခုံတန်းလျားမှာ
ထိုင်ဖတ်တဲ့စာအုပ်၊ ၃ ခါ ငိုရတဲ့စာအုပ်၊ စိတ်ထဲစွဲကျန်နေတဲ့စာအုပ်၊ အင်မတန်ကောင်းတဲ့စာအုပ်
စာကြည့်တိုက်က ငှားထားတဲ့ စာအုပ်တွေ၊ Gut & Psychology Syndrome
စာအုပ်ကတော့ ဆရာမကြီးဒေါက်တာဒေါ်ခင်နွှယ်ဝင်းညွှန်လို့ 
စာကြည့်တိုက်မှာ မရှိတော့ ဝယ်လိုက်တယ်
ကျနော်က ဆန်းထွန်းရဲ့ တိတ်တဆိတ် စာဖတ်သူပါ.. ဆန်းထွန်းပြောမှ သတိရတယ် The Help ကို ၀ယ်ထားပြီး စာမျက်နှာ ၂၀ လောက်ဖတ်ပြီး ဆက်မဖတ်ဖြစ်ဘူး.. ပြန်ဖတ်ဦးမှ အဲ့ဒီစာအုပ်ကလည်း Page One sale တုန်းက ၁ ကျပ်နဲ့ ၀ယ်ရထားတာ..စာအုပ်တွေ ညွှန်းပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ.
The Help ရုပ်ရှင်ကAcademy Award ၄ခုရတယ်။
Best Motion Picture of the Year , Best Actress နဲ့
Best Supporting Actress က၂ယောက်ရတယ်။
best seller တွေချည်းဘဲ..
အမည်မသိးဖတ်ပြီး ကောင်းမကောင်း ကြိုက်မကြိုက် ပြောဦးနော် ...
မမီးငယ်းThe Help ရုပ်ရှင်ကို လိုင်ဘရီကနေ ငှားကြည့်ဦးမယ် ... စာအုပ်တွေလည်း ယူမယ် ... လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုလို့ ကတော့ ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူး ... သတိပေးမှာ စိတ်ချ ... သိပ်မလိုချင်ရှာဘူး ... ဟ .. ဟး)
စာအုပ်တွေ ပြန်ဖတ်ဖို့ လုပ်နေတဲ့ အချိန် အခုပိုစ့်လေးကြောင့် တော်တော်အဆင်ပြေသွားပါတယ်
Kinokuniya ရောက်တုန်း Marie Kondo ရဲ့ စာအုပ် ၂ အုပ်ဆွဲခဲ့တယ်
The Help and Kite Runner ကိုတော့ လူကြုံနဲ့ မှာမလားလို့
အခု လိုမျိုး ဖတ်ကောင်းတာလေးတွေ ထပ်ရေးပေးပါဦး .... အပိုင်း ၂/၃/၄/၅ မျှော်နေမယ်